Degmada Gunagado Oo Lagusoo Dhaweeyay qurbojoogta Gobolka Jarar - Cakaara News
Degmada Gunagado Oo Lagusoo Dhaweeyay qurbojoogta Gobolka Jarar
Gunagado ( Cakaaranews ) Arbaco 27ka July 2016.Waxaa maanta degmada gunagado si heer sare ah loogu soo dhaweeyay qurbajoogta u dhalatay gobolka jarar oo shalay ka ambabaxay xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga si ay usoo indha-indheeyaan waxqabadyada horumarineed ee ay xukuumadu ka hirgalisay gobolka jarar .
Waftigan qurbajoogta ah ayaa intii ay kujireen socdaalkan waxaa si heer sare ah loogu soo dhawaynayay dhamaan tuulooyinka ay marayeen iyaga oo shacabku kaga hor imanayay wadooyinka .
Hadaba waftigan ayaa booqashadoodii kutagay mashruuca biyo-xidheenka ee lagahirgaliayay tuulada hoodaale iyo mashruuca biyo-xidheenka wayn ee tuulada goomaar .
Kadibna waftiga ayaa booqashadoodii kusii maray ceelka taariikhiga ah ee bulaale oo si meeqaam sare leh loogu soo dhaweeyay islamarkaana wuxuu wafigu ugasii gudbay dhinaca degmada gunagado oo ay wakhti xaadirkan kusugan yihiin.
Ugudanbayna, waftiga oo indhahooda kusoo arkay dhamaan mashaariicyada horumarineed ee ay xukuumadu kahirgalisay goobihii ay booqashada kusoo mareen ayaa bogaadiyay waxqabadyada xukuumada islamarkaana kamarakacay horumarka laxaadka leh ee kahanaqaaday guud ahaan deegaanka iyagoo gaar ahaana xusay horumarka gobolka jarar. Waxayna uga mahad celiyeen xukuumada waxqabadyada kaladuwan ee ay kafulisay dhamaan degmooyinka iyo tuulooyinka gobolka jarar.